Emva Unyango - Shijiazhuang YiLing Hospital
Uncedo kwisikhululo seenqwelo-moya. Ekumkeni kwakho China ukuba abuyele ekhaya, abasebenzi bethu nkonzo uza ampheleke ukuya kwisikhululo ze akuncede kunye namasiko khangela-in.
Nokufumana indawo itikiti. Phambi kokuba nakuphuma China, incwadi yethu abasebenzi uncedo lo moya okanye itikiti ngololiwe kuwe.
Landela-up Service. Xa ushiya esibhedlele, abasebenzi bethu baya amalungiselelo rhoqo olulandelayo-phezulu kuwe. Sinikezela Izikhokelo kuvavanyo zempilo, ukusetyenziswa kweziyobisi kunye izigulane ukunyamekela amacebiso kuni rhoqo.
Inkonzo nkongomiso Expert. Emva kokuba returns isigulane lizwe, ingcali uya kunika iingcebiso zonyango rhoqo ezisekelwe kwiziphumo unyango. Emva kokuba isigulane kuthi enze uvavanyo lonyango, yena uyakwazi usithumela i scan ingxelo yezonyango kuthi nge email. Emva koko, siya imeyile amacebiso ingcali leyo.